Imfashini eqhubekayo ayifaneleki kalula ephaketheni. Ngabe abathengi bazimisele ukuchitha into efanayo etholakala kwenye indawo ngemali encane? Ingabe imfashini eqhubekayo umkhuba nje?
Kunezindlela eziningi zokusimama. Ngakho-ke, inkolelo yokuthi imfashini eqhubekayo isezingeni eliphezulu, ayilona iqiniso. Izindwangu eziningi ezengeziwe ezinikezwayo zinobungane futhi azinayo intengo ephezulu. Njengokotini ophilayo olinywa ngokuziphatha futhi ukhiqizwe futhi udayiwe ngaphandle kwamadayi anobuthi. Izikhathi eziningi, izindleko ezinkulu zisendleleni elenziwa ngayo.
Ngakho-ke, umbuzo-ke uba ukuthi, ngabe abantu bazimisele ukusebenzisa imali ethe xaxa entweni eyenziwe yaba ngcono?
Lo ngumbuzo obalulekile, ngoba kungenzeka ukuthi ekuqaleni into entengo ephansi iyathandeka, kepha leyo nto ngeke yenziwe ngendlela efanayo, futhi ayenziwanga ukuthi ihlale isikhathi eside, ivikele imvelo, futhi icabangele abantu abenze into.
Ngabe abantu bazimisele ukweqa enqoleni yokwenelisa ebambezelekile?
Imfashini eqhubekayo akuyona into edlulayo. Imfashini eqhubekayo iqhubekela phambili, kancane kodwa ngokuqinisekile, njengoba abantu bebheka ukwenza izinqumo ezingcono futhi bacabangele imvelo nokuziphatha. Imvelo isenkingeni. Njengoba abantu beqaphela kakhudlwana, lokhu kuthinta ngqo imizamo abayenzayo yokwenza ngcono izimpilo zabo ngokwabo nakwabanye, namuhla nasesikhathini esizayo. kubo, ukugxila kungashintsha. Abanye abantu banenkani ngokuthenga kwasendaweni, noma okwenziwe e-United States of America, ngakho-ke lokho kuzoba yikhasimende elithile. Abanye bafuna ukuthenga ukotini kuphela, ngakho-ke lokho kungenye. Ngakho-ke, kuya ngomuntu.
Amaketanga okuhlinzeka ngemfashini avame ukuba yinkimbinkimbi kangako, ukuthi empeleni kunzima kakhulu ukwazi kahle ukuthi indwangu yenziwa ngani, nokuthi yenziwa kuphi ngokuya ngemvelaphi yayo, ukwenziwa kwayo kanye nokukhiqizwa kwayo. Kungakho ukungafihli izinto kukhanga kangaka kubantu abaningi. Ngakho-ke, abathengi baya ngokuya bazi. Kusezigabeni zokuqala. Uma sibheka ukuthi imboni yezokudla ifike kude kangakanani, siyabona, okufanayo kuyaqala nakwezemfashini. Njengomngcoli wesibili ngobukhulu ngemuva kukawoyela negesi, imfashini ibaluleke kakhulu. Futhi kuyisidingo esiyisisekelo, njengokudla, ngakho-ke akukho kungabaza ukuthi abathengi bazobe behlola izingubo ngaphezulu. Abantu bazofuna ukwazi ukuthi kungani kukhona ubuthi obuningi ezingutsheni zabo nokuthi kungani noma ngubani ecabanga, lokho kulungile.